ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – Page2– The Voice Journal
ဌာနဆိုင်ရာများ၏ လိမ်လည်တင်ပြမှုကို သိရှိဟု အတိုင်ပင်ခံပြော
မန္တလေး၊ မတ် ၈ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ လိမ်လည်တင်ပြနေမှုများကို သိရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့တွင် မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကပြုလုပ်သည့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောဆိုချက်ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းရာတွင် ယင်းကဲ့သို့...
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လိုက်ပါလာသည့် ရဟတ်ယာဉ် အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရသဖြင့် စိုးရိမ်သံများ၊ ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်ကပြည်သူများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံသည့် ခရီးစဉ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က မိုင်းတုံမြို့မှ မိုင်းဆတ်မြို့သို့ ထွက်ခွာစဉ် မိုင်းတုံမြို့က အတက်တွင် ရဟတ်ယာဉ်...
မည်မျှဆင်းရဲပါစေ မြန်မာသည် နေ၍ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ၁၄ ဆင်းရဲသော်လည်း မြန်မာသည် နေထိုင်၍ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဟု စိတ်ထဲတွင် ရှိနေကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။ “ကျွန်မ အမှန်ပြောရရင်တော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက ဘယ်လိုပဲ ဆင်းရဲ ဆင်းရဲ ကျွန်မအတွက်တော့ ဒီနိုင်ငံဟာ...
Articles / Features Stories
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လူထု၏ လေးစားချစ်ကြည်မှုကို ခံနေရဆဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မျိုးဆက်အနေနှင့် တစ်အူထုံ့ဆင်းဆိုသော်လည်း တစ်လမ်းတည်း မသွားနိုင်ခဲ့ကြပါ။ ယင်းကပင် ပြည်သူတို့၏ စိတ်ကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ တစ်လမ်းတည်းမသွားသည် မဟုတ်သေး။ တစ်ခုတည်းသော အထင်ကရ အိမ်ကြီးကိုပင် ထုခွဲရောင်းချဖို့ လေလံပစ်ရန်ပင်...
ဘင်္ဂါလီများနေရပ်ပြန်မလာသည့်ကိစ္စ မြန်မာဘက်က အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ ရပ်တည်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘင်္ဂါလီများ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်က မြန်မာသို့ ပြန်မလာသည့် ကိစ္စရပ်အပေါ် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များသည် စိုးရိမ်မှုဖြစ်ကြသော်လည်း မြန်မာဘက်က ရပ်တည်ကြကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် The Nation သတင်းဌာနက ရေးသားသည်။...
Editorials / lotaya
တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ဝေဖန်ကြလေ့မရှိသော ဒေသတွင်း အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင်ပင် အခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နှစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ သတင်းမီဒီယာမှတစ်ဆင့်လည်းကောင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကြပြီး သတင်းမီဒီယာတို့ကလည်း အားရပါးရရေးသားကြသည်ကိုကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ကျရောက်နေသော ပြည်ပဖိအား အလွန်ကြီးမားကြောင်း ထင်ရှားသည်။ နိုင်ငံအထီးကျန်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာစင်မြင့်မျိုးစုံတွင် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည့်၊...
ခြံအမှတ် ၅၄ အမွေရှင်းတမ်း
မိသားစုပိုင်ပစ္စည်းကို ခွဲဝေယူခြင်းသည် သာမန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ကိစ္စပင်။ သို့သော်ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ခြံတစ်ခြံကို အမွေခွဲဝေရန် လုပ်ဆောင်မှုမှာမူ ကမ္ဘာကျော်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာသည့်အပြင် ဝေဖန်သံများသောသောညံသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခရီးစဉ်ထဲ သူ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယခုမူ သူနှင့်ပတ်သက်သော အမျိုးမျိုးသော ထင်မြင်ချက် ဝေဖန်ချက်များထဲတွင်...
ခေတ်ကြီးလေးခေတ်နှင့် ခေါင်းဆောင်ကြီး လေးဦး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်ပယ်စုံအသွင်ကူးပြောင်းမှု တည်ငြိမ်အောင်မြင်ရေးအတွက် အင်စတီကျူးရှင်းများက အဓိကကျသည်ဟုဆိုလျှင် ငြင်းမည့်သူ မရှိသလာက်ရှားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် လတ်တလောကာလ နိုင်ငံ၌ အင်စတီကျူးရှင်းများ အားမကောင်းသေးပေ။ ချို့တဲ့နေသည်။ထို့အပြင် အင်စတီကျူးရှင်း၏ သဘောသဘာဝမှာ ယင်းတို့ကို ထူထောင်ရန် အချိန်များစွာ ပေးရသည့်နည်းတူ ထူထောင်ပြီးသော...
ရသစာပေတိုးတက်ရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပင် စကားဝိုင်းများကျင်းပ၍ စာဖတ်ဖို့ဆော်ဩနေရသည်။ “ရသစာပေက ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်ပေးစေနိုင်သလို တခြားလူ့ အသိုင်းအဝိုင်းက အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း နားလည်နိုင်အောင် ကူညီနိုင်တယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပြုလုပ်သည့်...
Singapore Lecture က ရှင်းပြသော မြန်မာ့လမ်းကြောင်းနှင့် အခက်အခဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရအပြီး ပထမအကြိမ် ၂၀၁၆ စင်ကာပူခရီးစဉ်တွင် “စင်ကာပူကို နှစ်၂၀ နဲ့ ကျော်တက်မယ်” ဟူသောစကားသည် မှတ်သားစရာအဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်။ ယခုတစ်ခေါက်မှတ်သားစရာသည် Singapore Lecture ဖြစ်သည်။ ယင်းမိန့်ခွန်းရော၊ မိန့်ခွန်းအပြီး အမေးအဖြေများတွင်ပါ မြန်မာ့လက်ရှိအခြေအနေ၊ အခက်အခဲများနှင့်...